မြားများ: ကဗျာဆရာ၊ ကဗျာအယူအဆနှင့် ကဗျာရေးခြင်း
Poetry(ကဗျာများကို ရေးသားထုတ်လုပ်ခြင်း)ဟာ သင်ကြားတဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး.။အမှန်တကယ်က potery ဆိုတာ definition အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုနှင့် lim
initation ကန့်သတ်မှုတွေကို ခုခံပုံရတယ်.။Poetry ဆိုတာ ဘာလဲ စတဲ့ ကဗျာဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေလည်း အများကြီးထွက်လာတယ်။. ပြီးတော့ ကဗျာဟာ ကဗျာ ဖတ်သူအတွက် ဘာလုပ်ပေးသလဲ။ ကဗျာ အမှန်တကယ် ဖတ်သူ တဦးအတွက် ကဗျာက ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အရာ တွေထဲက တခုကတော့ ကဗျာ ဖတ်သူက သူသိထားတယ်လို့ ထင်တဲ့ အရှိတရားတွေကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိမှု အမျိုးအစားများအ ဖြစ်သို့ ကူးပြောင်း ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီ အလုပ်စဉ်process ဟာ ကဗျာဖတ်သူတွေ လိုပဲ ကဗျာရေးသူတွေအတွက်လည်း personal process ကိုယ့်တွေ့အလုပ်စဉ်ပါပဲ လို့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်က V.O.A က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Contemporary American Poetry စာအုပ်ရဲ့ အဖွင့်နိဒါန်းမှာ ရေးသားခဲ့တယ်။
ထူးခြားတာက ဒီ lectures series မှာ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက scholary format ပညာရှင်သုံး ပုံစံနဲ့ တွေ့နေကျ ကဗျာတွေ အက်ဆေးတွေလို မဟုတ်ဘူး.။forum talk ဖိုရမ် ဆွေးနွေးမှုကို အမေရိကန်ကဗျာဆရာတွေ ကိုယ်စားပြု ရွေးချယ်ထားတဲ့ အမေရိကန် ကဗျာဆရာ ၁၉ ယောက်ကဆွေးနွေး ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။. ဒီ Forum Lectures Series ကို စီစဉ်သူ Howard Nemerov က ပါဝင်တဲ့ ကဗျာဆရာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး အဲဒီ ကဗျာဆရာတွေကို အဓိက ကျတဲ့ မေးခွန်းလေးခုအား ဖြေဆို ပြောကြားစေခဲ့ပါတယ်.။ အဲဒီ မေးခွန်းတွေကတော့…
၁။ သင့်ရဲ့ ကဗျာရေးတဲ့ အလုပ်မှာ သည်ကဗျာစရေးတည်းက character ဒါမှ မဟုတ် style သဘာဝအတိုင်း ပြောင်းလဲ သွားတာကို သင်တွေ့ရပါသလား။
၂။ သင့်ရဲ့ poetry မှာarevolution ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှု ရှိခဲ့သလား။ဒါမှ မဟုတ် သင် ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ အရာ အားလုံးဟာ အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ နည်းစနစ်ကို သုံးထားတဲ့ အနုပညာ သဘောမျိုးလား။
၃။ဒီရာစု နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာကြီး ပြောင်းလဲ သွားသလား။ မသွားဘူးလား။ဆိုတဲ့မေးခွန်းက သင့်ရဲ့ poetry မှာ သင့်အား အာရုံစိုက်အောင် လုပ်ခဲ့သလား။ ဒါမှ မဟုတ် သင့်ရဲ့ အလုပ်က လူ့သဘာဝတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာမှုကို အားပိုကောင်းလာဖို့ ဒါမှ မဟုတ် ပိုပြီး ဆိုးရွားလာဖို့ အမြင်ကျယ်လာအောင် လုပ်ပေးသလား။ ဒါမှ မဟုတ် သင့်ရဲ့ အလုပ်က သိသာ ပေါ်လွင်တဲ့ အပြောင်းအလဲ အများအပြားကို သဘာဝအရ ဖြစ်တဲ့ နည်းအတိုင်း ဖြစ်တယ်လို့ ရှုမြင်သလား။
၄။ proper function of criticism ဝေဖန်ရေးရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုက ဘာလဲ။ သင် သဘောကျတဲ့aspecies of criticism ဝေဖန်ရေး အမျုိးအစား တစ်ခု ရှိသလား။
ဒါပေမယ့် Mr.Nemerov က ကဗျာဆရာတွေကို ဒီမေးခွန်းတွေအား တသမတ်တည်းဖြေဖို့ မပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါဘူး။ သူက ဒီမေးခွန်းတွေကို ယေဘုယျကျတဲ့ နည်းပေးလမ်းပြဘက် ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်.
ဒီ Forum Lectures Sereis ထဲမှာ Ricard Eberhart လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်.။သူက Dartmouth Collage မှာနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကဗျာဆရာ တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်.။သူက How I Write Poetry ကျွန်တော် ကဗျာရေးသားပုံ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီဖိုရမ်မှာ ပို့ချ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် ၁၅ နှစ်အရွယ် အထက်တန်းကျောင်းသား အရွယ်က စပြီး ကဗျာ ရေးခဲ့တယ်.။ Menesota ပြည်နယ်. Austin မှာပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာ တိုင်းရင်းသား စကားလုံးတွေရဲ့ ထောက်ပံ့ ကူညီမှု ရခဲ့ပြီး ကဗျာ အများ အပြားကို ကျေနပ်မှု ရှိအာင် ရေးသားနိုင်ခဲ့ပါတယ်.။ကျွန်တော့်ရဲ့ စကားလုံးများ ပါဝင်တဲ့ စိတ်ကူး ပုံဖော်မှု Verbal imagination ဟာ သင်္ချာသမား တယောက်နဲ့ ကွဲလွဲပုံ ရပါတယ်.။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ကိန်းဂဏန်းတွေမှာထက် ကဗျာလင်္ကာမှာ ပိုပြီး တော်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် စတင် သတိထားခဲ့မိတယ်.။ ကျွန်တော့် အမေက ကဗျာရေးတာကို မြတ်နိုးတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ စာကြည့်စားပွဲမှာ သားရေ အဖုံးချုပ်ထားတဲ့ Tennyson ရဲ့ ကဗျာ မိတ္တူတွေ ရှိတယ်.။တင်နီဆွန်ဟာ ကျွန်တော် ပထမဆုံး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဖတ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမ ဦးဆုံး ကဗျာဆရာ တယောက်ပါ။ သူဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စံပြ ဖြစ်လာခဲ့တယ်.။ သူ့ရဲ့ Blending of Sound and Sence အသံနဲ့ အနက်ရဲ့ ရောက်စပ်မှု အားလုံးဟာ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ရဲံ့ စောစောပိုင်း Poem excercises ကဗျာလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မူရင်း မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း un-tennyson အတော်အသင့် မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား နေ့ရက်တွေမှာ ဆက်လက် ရှင်သန်လာခဲ့တယ်.။ ကျွန်တော် ၁၆ နှစ်သား အရွယ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ Indian Pipe ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ကျောင်းမှတ်စု စာအုပ် အသေးကလေး တစ်အုပ်ထဲမှာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကျွန်တော် ၄၉ နှစ်အရွယ် ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်.။ဒီကဗျာလေးဟာ အမေရိကန် အင်ဒီယန်း လူမျိုးစုတွေရဲ့ Partial Death တစိတ်တဒေသ ဇာတ်သိမ်းမှုကို ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ကျွန်တော်ဟာ Indian Pipe အင်ဒီယန်း ခရာတွေကို ကျွန်တော့် နေအိမ်အနီး သစ်တောတွေထဲမှာ တွေ့ခဲ့တယ်။ Emily Dikinson က ထူးထူးခြားခြား အင်းဒီးယန်းခရာတွေကို နှစ်သက်တာကို ကျွန်တော် သဘောကျလာခဲ့တယ်။ သူမ ကွယ်လွန်ပြီးမှ ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရခဲ့တဲ့ စာအုပ် Posthmous Books တွေရဲ့ အဖုံးတွေမှာ အင်ဒီးယန်း ခရာတွေကို ဖောင်းကြွပုံ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီကဗျာရဲ့ အပ်ုဒ်သုံးပိုဒ်ဟာ ဒီကဗျာကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိတဲ့ အချိန် ထိုနှစ်များမှ Classic Elegance အထူးခြားဆုံး တပ်မက်ဖွယ်ရာတစ်ခု ရှိပုံ ရပါတယ်.။ပြီးတော့ နူးညံ့တဲ့ အနည်းငယ် တမ်းတစရာ ကောင်းတဲ့ ကဗျာရဲ့ အားတွေကိုလည်း ထုတ်ပေးပုံ ရပါတယ်။
searching once I foundaflower
Byasluggish stream.
waxy white ,astealthy tower
ToaIndian's dream.
This its life supreme
Blood red winds the sallow creek
Draining as its flows
Left ths flower all white and sleek
fainting in repose
Gentler thanarose
Red man's pipe is nowaghost
Whispering to beware
Hinting of the savage host
Once that travelled there.
Perfume frail as air.
ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်လွန်းတဲ့ စမ်းချောင်း ကလေး တစ်ခုရဲ့ နံဘေး
တခါက ငါ ပန်းကလေးတပွင့် တွေ့ခဲ့တာကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါ
အင်ဒီးယန်းရဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက် တခုအတွက်
ဒါဟာ အင်ဒီးယန်း အိပ်မက်တွေရဲံ့ ဘဝ အထွတ်အထိပ်။
နီစွေးတဲ့ သွေးတွေက ချောင်းရေ စီးသလို စီးရင်း
ဒီ ဖြူဖတ်ဖြူရော် ချောင်းကလေးကို ကွေ့ပတ်သွားကြတယ်။
ပန်းကလေးကို အိပ်စက်ခြင်းမှာ သတိမေ့မျောစေရင်း
နှင်းဆီတပွင့်ထက် ပိုပြီး နူးညံ့စေရင်း
အခု လူနီရဲ့ ခရာက သတိထားထားမိအောင် တီးတိုးပြောနေတဲ့
တချိန်တုန်းက အဲဒီ နေရာမှာ သွားလာနေတဲ့ အိမ်ရှင် လူရိုင်းရဲ့
လေလို အထမခံတဲ့ ရနံ့တခုရဲ့ အရိပ်အမြွက်ကို ပြလို့….။
ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ကဗျာ စာအုပိကို ထုတ်ဖို့ အကူအညီ ပေးခဲ့သူက I.A. Richards ဖြစ်ပါတယ်.။ A Bravery of Earth ဆိုတဲံ့ ကဗျာ ရှည်ဖြစ်ပြီး ဒီကဗျာ ရှည်ကို Wordsworth ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တယ်၊။ St.John's collage ရဲ့ ခန်းမ တခုတည်းမှာ ရှိတဲ့ Pickering ရေးဆွဲထားတဲ့ Wordsworth ရဲ့ ပုံတူအောက်မှာ ကျွန်တော် ထိုင်ခဲ့တယ်။ ဝက်စ်ဝါ့ဒ် အပြင် ကျွန်တော့် အပေါ်မှာ ပို၍ နက်ရှိူင်းတဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုနဲ့ လွှမ်းမိုး ခဲ့သူကတော့ Willium Blake ဖြစ်ပါတယ်။ Hopkins နဲ့ တွေ့တော့ သူက ကျွန်တော့်ကို အများကြီး ရွေ့လျားစေတယ်။ ဝေဖန်သူတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ ရေးဟန် ထဲမှာ သူ့ဟန် တစွန်းတစ နှစ်အနည်းငယ် ကြာ ရှိနေတာကို သတိပြုမိခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ဆက်ပြီးတော့ ဖြစ်မနေခဲ့ပါဘူး.။
(စာကြွင်း။ ။Poetry Life စာအုပ်မှ ကဗျာဆရာ စေတ၏ ဆောင်းပါး၊ စာတမ်းကို တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။း)…)
Labels: ခေတ်ပေါ်ကဗျာ စာတမ်း